painting exhibition cum sale in mg marg - Hindusthan Samachar Nepali
एमजी मार्गमा चित्रकला प्रदर्शनी एवं बिक्री, किनेर कलाकारहरूलाई प्रोत्साहित गरिदिने आह्वान
24 Nov 2021 17:37:47
गान्तोक, 24 नोभेम्बर (हि.स.)। हाम्रो वार्ता टेलिभिजनको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित 'सिक्किम साहित्य उत्सव 2021' अन्तर्गत चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। कूल तीन वर्गमा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिताका विजेताहरूको चित्रकला एमजी मार्गमा प्रदर्शनी एवं बिक्रीमा राखिएको छ। तीनै वर्गका विजयी प्रतिभागीहरूलाई आगामी 26 नोभेम्बरको दिन आयोजन गरिने मुख्य कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिने छ।
समारोह आयोजन समितिका संरक्षक जेकब खालिङले सिक्किम साहित्य उत्सव अन्तर्गत कूल तीन वर्ग (कक्षा3देखि 6, कक्षा7देखि 10 र कक्षा 11 देखि पूर्वस्नातक) मा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन गरिएको र उत्कृष्ट चित्रकलाहरू एमजी मार्गमा प्रदर्शनी एवं बिक्रीमा राखिएको जानकारी गराए। उनले यस प्रतियोगितामा अधिकांश विद्यार्थीहरू एवं उदीयमान चित्रकारहरूले भाग लिएको अवगत गराउॅंदै प्रदर्शनीमा राखिएका चित्रहरू हेरिदिने र किनेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित पनि गरिदिने आह्वान गरे। उनले चित्र बिक्री भएको सतप्रतिशत पैसा सोही चित्रकारलाई नै प्रदान गरिने पनि जानकारी गराए। उनले प्रदर्शनी दुई दिन 24 अनि 25 नोभेम्बरसम्म रहेको बताए।
उनले विशेषगरी राज्यका बुद्धिजीविहरूलाई आएर प्रदर्शनी हेरिदिने र किनेर युवा प्रतिभाहरूलाई प्रेरित गरिदिने आह्वान गरे। उनले तीनै वर्गका विजेताहरूलाई आगामी 26 नोभेम्बरको दिन मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको बाहुलीद्वारा पुरस्कृत गरिने थप जानकारी दिए।
यस अतिरिक्त उनले 26 नोभेम्बर बिहान9बजीको साटो अब 10:30 बजी कार्यक्रम शुरू गरिने पनि जानकारी गराए। उनले त्यस दिन संविधान दिवस पनि परेकोले मुख्यमन्त्री पहिला राजभवनमा आयोजित गरिने कार्यक्रममा सहभागी बन्नेछन् र त्यसपछि सिक्किम साहित्य उत्सवमा सहभागी बन्ने बताए। उनले उक्त दिनको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैलाई सहभागी भइदिने अपील पनि गरे।
उनले साहित्य हाम्रो समाज अनि अस्तित्वको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको आशय व्यक्त गर्दै साहित्यको क्षेत्रमा समृद्ध देशहरूले धेरै प्रगति गरेर अगाड़ी बढिरहेको छ भनी बताए। उनले आफुहरूले सिक्किममा बौद्धिक अभियानलाई टेवा पुऱ्याउन प्रयासरत रहेको र यो कार्यक्रम सोही दिशामा एउटा पाइला रहेको बताए। उनले निकट भविष्यमा सिक्किममा साहित्य पर्यटन शुरूवात गर्ने उद्देश्यलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको अवगत गराए।
यसरी नै प्रेस क्लब अफ् सिक्किमका अध्यक्ष जोसेफ लेप्चाले सिक्किम साहित्य उत्सवमा सिक्किमलगायत दार्जीजिङ, कालेबुङ, खरखाङ, डुवर्स र नेपालबाट पनि लगभग 70 जना प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गरिएको जानकारी दिए। उनले त्यस दिन साहित्यको क्षेत्रमा अनवरत उल्लेखनीय योगदान दिॅंदै आएका सिक्किम, दार्जीलिङ र कालेबुङका वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको बताए।
चोरीको समानको साथ दुई पक्राउ
सिलगढ़ी, 08 दिसम्बर (हि.स.)। फांसीदेवा पुलिसले चोरीको आरोपमा दुई जनालाई मंगलबार अबेर राति पक्राउ गरे..
पेट्रोल-डीजलको दाम 34औं दिन पनि स्थिर
नयॉं दिल्ली, 08 दिसम्बर (हि.स.)। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कॉंचो तेलको दामले 75 डलर नाघेको छ। यद्यपि, बज..
मल्ली चेकपोस्टबाट 401 ग्राम गॉंजासहित आरोपित पक्राउ
गान्तोक, 07 दिसम्बर (हि.स.)। दक्षिण सिक्किमको मल्ली थाना क्षेत्र अन्तर्गत मल्ली चेकपोस्टबाट एक व्यक्..